Petition · Give Ye Linn Naing(NatS0e)'s his place back in Moonton or We quit Mobile Legends:Bang Bang · Change.org
Give Ye Linn Naing(NatS0e)'s his place back in Moonton or We quit Mobile Legends:Bang Bang
Mobile Legends: Bang Bang- Myanmar Community started this petition to Moonton and
Myanamr Version- ရဲလင်းနိုင် (NatS0e) သည် MLBB ကို မြန်မာကစားသူများထံသို့ ကျယ်ကျယ်ပျံ့ပျံ့ရောက်ရှိစေရန် အားထုတ်မှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှု အများအပြား လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာကစားသူများမှ ရဲလင်းနို်င် (NatS0e) ကိုသာ MLBB၏ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ထားရှိစေလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤစာမှတစ်ဆင့် ရဲလင်းနိုင် (NatS0e)သည် မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမှ မပေါက်ကြားစေခဲ့ကြောင်း သက်သေပြလိုပါသည်။ မြန်မာကစားသူများသည် ရဲလင်းနို်င် (NatS0e) ကိုသာ MLBB မြန်မာ Community ကို ဆက်လက် ဦးဆောင်စေချင်ပါသည်။ ဤသို့ ထုတ်ပယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကုမ္ပဏီအား ပြန်လည် သုံးသပ်ပေးရန် တောင်းဆိုလိုပါသည်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ကစားသူများအတွက် ၂နှစ်ကျော်ကြာ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် ရဲလင်းနိုင် (NatS0e)သည် ဤကဲ့သို့ ထုတ်ပယ်ခံရမှုနှင့် မထိုက်တန်ကြောင်း ပြောလိုပါသည်။ မြန်မာကစားသူများကလည်း ကုမ္ပဏီမှ ရဲလင်းနိုင်(NatS0e) အား ထုတ်ပယ်ခဲ့ပါက MLBB အား စွန့်ခွာကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောလိုပါသည်။....
English Version- Ye Linn Naing (NatS0e) has givenalot of effort and work in bringing Mobile Legends: Bang Bang to Myanmar Community. We, Myanmar players, need Ye Linn Naing (NatS0e) as our national representative of Mobile Legends: Bang Bang. We are signing this to prove the innocence of Ye Linn Naing (NatS0e) that he didn't share leaks. All the Myanmar players want Ye Linn Naing (NatS0e) to continue leading the Myanmar community of Mobile Legends: Bang Bang . They also want the company to reconsider this issue. After working hardly for Myanmar community for over2years, they all accept Ye Linn Naing (NatS0e) doesn't deserve to get treated like this.Many players haveasudden urge to leave MLBB if the company fires Ye Linn Naing (NatS0e)....
Please share my name and email address with Mobile Legends: Bang Bang- Myanmar Community, so that I can receive updates on this campaign and others.